Kukura kweFari Island muMaldives kunosanganisira Ritz Carlton
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Kukura kweFari Island muMaldives kunosanganisira Ritz Carlton
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Investments • Maldives Kuputsa Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
pontiac nyika fari zviwi nzvimbo mepu
Singapore-yakavakirwa real estate anovandudza, Pontiac Land yakazivisa kuvhurwa kweFari Islands muMaldives, yakagadzirirwa kuvhura muQ4 2020. Inowanikwa muNorth Malé Atoll, makumi mashanu-maminetsi nebhasiketi kubva kuMalé International Airport, Fari Islands inzvimbo yepamusoro yeMaldivian chiitiko chinopemberera zvakasikwa, hunyanzvi nekubatana. Iyo archipelago inoratidzira matatu epasirose-mahotera, inesimba Marina uye chinangwa-chakavakwa Village kambasi yakatsaurirwa kupa yakanyanya kunaka hupenyu hwevashandi vedu.
Zvichienderana nePontiac Land inotsanangura hunhu hwekunakisa uye nebasa rakasarudzika, vashanyi vemahotera emhando yepamusoro Capella Hotels & Resorts, Iyo Ritz-Carlton Hotel Kambani, uye Patina Mahotera & Resorts vanozotarisira zvivakwa zveFari Islands. Inozivikanwa nenzira yavo yakatarwa yekugamuchira vaeni, yega yega yemhando nhatu dzakasarudzika inopa zviitiko zvakanaka asi zvinosiyanisa, kuve nechokwadi chekuti kushanya kwese kuzvitsuwa kwakanyatsonaka, chero chiitiko. Spaces dzakagadzirwa zvinehunyanzvi nevakakurumbira mapurani Studio Mk27 (naMarcio Kogan), Kengo Kuma & Associates, uye Kerry Hill Architects, kuti vagadzire hunyoro hwakadzikama hwekugadzikana uye hwemagariro.
Vashanyi vemuhotera vanozowanawo inoyevedza Fari Marina - yezvitsuwa zvinorovera moyo wevanhu. Yakavakwa padhuze neyakajeka Beach Club, Fari Marina ine inonakidza maboutique uye sarudzo yakasarudzika, upscale chikafu uye zvinwiwa sarudzo. Fari Islands inosundira miganho yekugamuchira vaMaldivian, kutsvaga kubatana kwekugadzira nemazita ane mukurumbira muhunyanzvi, mimhanzi, hunyanzvi hwekubika, kutora mifananidzo, fashoni uye dhizaini. Zvirongwa zvakagadzirirwa kukurudzira pfungwa yenharaunda, nepo ichichengetedza kuonga kwakadzama kweiyo runako rweMaldives.
Pontiac Nyika zvakare yakazvipira kuvaka inovandudza nharaunda yekugara yevashandi vese. KuFari Islands, yakapamhamha chinangwa-chakavakwa Fari Village ine vanhu-yekutanga nzira yakatsaurirwa kusimudzira chizvarwa chinotevera cheMaldives 'vepamusoro hoteliers. Vashandi vanogona kutarisira kuronga kunofungidzirwa kwedhorobha, huwandu hwakazara hwezvivakwa zvekuvaraidza uye zvinowanikwapo, mikana yekuenderera mberi yekuvandudza, uye yekarenda yemagariro inoshanda. Fari Islands inotsvaga kukura mhuri iyo inomiririra uye inotsigira iyo isingaenzaniswi Fari chiitiko.